Technology – Page 11 – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
ह्वाट्सएप प्रयोग गर्नुहुन्छ ? अब आयो तपाईलाई खुसीको खबर
एजेन्सी । म्यासेज र कल सुविधा दिने मोबाइल एप ह्वाट्सएपबाट अब भिडियो कलिङ समेत गर्न सकिने भएको छ । ह्वाट्सएपले नयाँ सेवाबारे घोषणा गर्दै संसारभरमा अब एक अरब प्रयोगकर्ताका लागि यो सुविधा क्रमिक रुपमा उपलब्ध गराउँदै जाने जानकारी दिएको छ । आफ्नो नयाँ फिचरबाट स्काइप, फेसटाईम, गुगल डुओजस्ता म्यासेजिङ एपसँग प्रतिस्पर्धाका लागि ह्वाट्सएपले नयाँ योजना […]
फेसबुकले जुकरबर्गसहित २० लाख जीवितलाई श्रद्धान्जली दिएपछि…
एजेन्सी । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले भुलबस यसका निर्माता मार्क जुकरवर्गसहित २० लाख जीवित व्यक्तिलाई श्रद्धान्जलि दिएको छ । पछि यसलाई भयानक त्रुटी भन्दै सच्याएको छ । फेसबुकका प्रवक्ताले भनेका छन्, ‘केही समय श्रद्धान्जलिको आशय भएको सन्देश केही व्यक्तिको फेसबुक एकाउन्टमा पोस्ट भएको थियो, यो एक ठूलो गल्ती थियो, जसलाई हामीले सच्याएका छौं । फेसबुकबाट यसप्रकारण […]
अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा अन्तरिक्षबाट पनि भोटिङ
एजेन्सी । विश्वभरमा चर्चित अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा यो धर्तीबाट धेरै टाढा अन्तरीक्षबाट समेत भोटिङ भएको छ । नासाका अनुसार बाहिरी अन्तरिक्षमा रहेका एकमात्र अन्तरिक्षयात्रीले अन्तरिक्षयानबाट नै आफ्नो भोट दर्ज गराएका हुन् । नासाले शेन किम्ब्रो अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरीक्ष स्टेशनबाट मतदान गर्ने लामो समयदेखि चलिआएको परम्परामा सामेल हुने पछिल्लो अन्तरिक्षयात्री बनेका छन् । शेन रुसी सोयुज रकेटमा […]
क्यान्सरबारे यस्तो खतरनाक रिपोर्ट सार्वजनिक
काठमाडौं । क्यान्सरका कारण सन् २०३० सम्ममा हरेक वर्ष ५५ लाख महिलाको मृत्यु हुनसक्ने खतरनाक रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । सो रिपोर्ट अनुसार दुई दशकभन्दा कम समयमा क्यान्सर रोगीको संख्या ६० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । गरिब र मध्यम आय भएका देशमा क्यान्सरका कारण मृत्यु हुनेमा महिलाको संख्या अधिक हुनेछ । औषधी निर्माता कम्पनी […]
अन्ततः फेसबुकले माग्यो माफी
एजेन्सी । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले स्तन क्यान्सरसम्बन्धि जनचेतनामुलक भिडियो हटाएकोमा माफी मागेको छ । एक स्वीडिस समूहले पोस्ट गरेको जनचेतनामुलक भिडियो फेसबुकले गलत तरिकाले खिचिएको भन्दै हटाएको थियो । स्वीडिस समूह क्यान्सरफोन्डेनले पोस्ट गरेको भिडियोमा एनिमेसन गरिएको महिलाको तस्बिर गुवाली रंगको घेरा गरिएको स्तनसहित देखाइएको थियो । फेसबुकले भिडियोमा प्रयोग भएको महिलाको एनिमेटेड तस्बिर अपमानजन […]
फेसबुकमा कमेन्ट गर्न लाग्नुभएको हो ? पहिले यो पढ्नुहोस्
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी कमेन्ट गर्नेलाई प्रहरीले कारबाही गर्ने भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा अपशब्द प्रयोग नगर्न सबैलाई सचेत गराएको हो । नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागले विज्ञप्ति जारी गरी समाजिक सञ्जालमा अश्लिल, अपशब्द र अनावश्यक कमेन्टको प्रयोग बढ्दै गएको र पीडितहरुबाट आफ्नो इज्जत तथा प्रतिष्ठामा प्रतिकुल असर परेको गुनासो आएपछि यस्तो कदम चाल्न […]
मंगलमा भूकम्पबाट हाइड्रोजन मानवजीवनका लागि हाइड्रोजन
एजेन्सी । मंगल ग्रहमा भूकम्पका क्रममा चट्टानको आपसी घर्षणका कारण बनेका नयाँ चट्टानमा हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रामा हुनसक्ने वैज्ञानिकहरुले दावी गरेका छन् । एक नयाँ अध्ययन अनुसार मंगल ग्रहमा यसप्रकारका भूकम्पीय गतिविधि जीवनका लागि आवश्यक हाइड्रोजन उत्पादन हुनसक्ने बताइएको हो । शोधकर्ताहरुले स्कटल्यान्डको समुद्री तटमा ‘आउटर हेब्राइट्स’ को सक्रिय ‘फल्ट लाइन’ को आसपासमा बनेका चट्टानी संरचनाको […]
विगत १३६ वर्षपछिको सबैभन्दा गर्मी अगस्ट
एजेन्सी । अगस्ट महिना विगत १३६ वर्षयताकै सबैभन्दा गर्मी महिनामा परेको छ । आधुनिक तरिकाले राखिएका विभिन्न रेकर्डअनुसार सन् २०१६ को अगस्ट महिना १३६ वर्षपछिको सबैभन्दा गर्मी महिनामा दर्ज भएको हो । अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले अगस्ट २०१६ को गर्मी पछिल्ला ११ महिनादेखि बढ्दै आएको तापमानको परिणाम भएको जनाएको छ । मौसमी तापमानसम्बन्धी चक्रमा जुलाई […]
एप्पलको आइफोन सेभेन लन्च, यस्ता छन् विशेषता
काठमाडौं । एप्पलले सनफ्रान्सिस्कोमा आफ्नो नयाँ उत्पादन आईफोन सेभेन लन्च गरेको छ । यसमा परम्परागत हेडफोन सकेट छैन भने लाइटनिङ कनेक्टर राखिएको छ । एप्पल कम्पनीले वायरलेस एयरफोनको प्रयोगलाई बढवा दिनेगरी एयरपाट्स राखेको छ । एप्पलले यस दिशामा कदम अघि बढाउनका लागि कम्पनीले हिम्मत जुटाउनुपर्ने जनाएको छ । आइफोन सेभेनमा हेडफोन प्रयोग गर्नका लागि एडप्टर […]
Posted in: mainNews, TechnologyLeaveacomment
फेसबुकमा आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुभएको छ ? तत्कालै हटाउनुहोस्
काठमाडौं । तपाईले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा मोबाइल नम्बर राख्नु भएको छ भने त्यसलाई तत्कालै हटाउनुहोस् । तपाईले फेसबुकमा राख्नु भएको नम्बरबाट तपाईका गोप्य सुचनाहरु निकाल्न सक्छ । यसो गरेमा कसैले तपाईको जानकारीको गलत ठाउँमा प्रयो गर्न पनि सक्छ । एक रिपोर्टका अनुसार साल्ट एजेन्सीका टेक्निकल डाइरेक्टर रेजा मोउनुद्दिनले एक कोडिङ स्क्रिप्टको प्रयोग गरेर बेलायत, अमेरिका […]
Posted in: TechnologyLeaveacomment